Kirismaska ​​ayaa soo socda. Tani maahan oo kaliya maalin murugo gelineysa sanadka cusub, laakiin sidoo kale waa maalin uu qof walba hadiyado isu siinayo isla markaana uu muujinayo dareenkiisa. Noocyada xaddidan ee Christmas-ka ee ganacsiyada kala duwan ayaa raaci doona. Sidee ku seegi kartaa fursaddan weyn?
Hadiyadaha kirismaska, macnaheedu waa kadis, macnaheedu waa mid gaar ah. Noocyo badan ayaa ka faa'iideysan doona fursaddan si ay u muujiyaan daqiiqado kala duwan oo Kirismas ah inkasta oo naqshado hal abuur leh ay ku jiraan baakadaha. Waa kuwan qaar ka mid ah baakadaha Kirismaska ​​ee ay gabdhuhu jecelyihiin, lagana yaabee inay kugu dhiirrigeliyaan.
1. Xidigaha Xidigaha
Starbucks waxay ciyaaraysay suuq geynta baakadaha sanado badan, Kirismaskaana sidoo kale kama reeban.
Sannadkii 2020, Starbucks waxay soo saartay saddex cabitaan Kirismas ah, kuwaas oo kala ah Toffee Hazelnut Latte, Lava Black Mocha iyo Flowing Gold Christmas Tea Latte.
Koobka Kirismaska ​​ee sannadkan wuxuu ku darayaa naqshadda barafka, xiddigaha, iyo rashka naqshadeynta, isagoo keenaya jawi Kirismas ah oo xoog leh iyo carruurnimo buuxda. Koob noocaas ah oo ku habboon, qof walba wuu jecel yahay.
Intaa waxaa dheer, Starbucks waxay kaloo soo saartay taxane ah alaab durugsan sida furayaasha, xirmooyinka kirismaska, keega kirismaska, iwm si loo daboolo baahiyaha kala duwan ee dadka.
Isbeddelada ku yimid baakadaha Starbucks waxay la kulmeen filashooyinka dadka ee Kirismaska ​​iyo kororka aqoonsiga isticmaalaha. Waxaa la rumeysan yahay in wareegga 'Starbucks' ee bisha Diseembar uu muujin doono qiimaha suuqgeynta baakadan.
2. jacayl cad
Shiroi Koibito waa caan sababtoo ah macnaheeda macaan, iyo xilliga Kirismaska, waxay u doorataa casaanka mawduuca waxayna ku muujineysaa goobta xafladaha Kirismaska ​​ee sanduuqa. Waxaa la yaab leh, boorsada buskudka cookie sidoo kale waa daabacaad gaar ah oo Kirismas ah. Hadiyadani waxay umuuqataa inay ka timid Santa Claus.
Baakadaha M & M marwalba waa wax lagu qoslo, sannadkanna, si loogu dabbaaldego Kirismaska, qoyska M & M ayaa madaxa u saaray koofiyadaha Santa.
Kirismasku maahan oo keliya fasax, laakiin sidoo kale waqti fiican ayey u tahay nooc kasta inuu xayeysiiyo. Baakadaha munaasabadda ma aha oo kaliya inay ka tarjumeyso qaabka ganacsiga, laakiin sidoo kale waxay u gudbin kartaa daacadnimada ganacsiga macaamiisha, iyadoo kordhinaysa dareenka macaamilka ee aqoonsiga.
Dadka qaarkiis waxay had iyo jeer dhahaan in kaliya noocyada waaweyn ay u baahan yihiin inay ka faa'iideystaan ​​xaaladda si kor loogu qaado. Xaqiiqdii, xafladaha waa waqti ku habboon kor u qaadista summadaha yaryar. Maalmahan, Kaliya wax soo saarka wanaagsan ee leh sumcad wanaagsan ayaa ka ciyaari kara door isku dhufasho leh. Xidhmada Beyin waxay ku siin kartaa noocyo kala duwan oo ah baakadaha naqshadaynta iyo adeegyada wax soo saarka si loo daboolo baahiyaha shaqsiyeed ee leh tayo wanaagsan iyo adeeg wanaagsan.
Haddii aadan soo gaarin Kirismaska, markaa ha seegin sannadka cusub dhibicdan weyn.